Pakistan: Malala Yousufzai sy ny fanafihana amin’ny fiaramanidina baikoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2012 11:53 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, srpski, Français, Español, polski, English
Hatramin'ny nanafihan'ny olona mitam-basy an'ilay mpitolona tanora Malala Yousufzai tany Swat, dia nampametra-panontaniana maro ny fahombiazan'ny fanafihana ataon'ny fiaramanidina baikoana any Pakistan. Taorian'ny fanafihana tamin'ny 9 oktobra 2012 (jereo ny fanadihadihana Global Voices) dia hatezerana no nivoaka eran'izao tontolo izao, ary anisan'ny tezitra koa aza ireo antoko politika sy antokom-pivavahana any Pakistan nanameloka ny zava-nitranga, izay ny Tehreek -e-Taliban Pakistan (TTP) no nitonona ho tompon'antoka.
Manakiana ny fanjakana ny lehiben'i Jamiat Ulema Islam-Fazal , Fazlur Rehman, noho ireo maty aman'arivony maro izay vokatry ny politikan'ny fitondrana. Milaza koa izy fa raha takiana ny famaizana ireo olona namono an'i Malala Yousufzai, dia tsy misy manohitra kosa ny fatiolona nataon'ny fiaramanidina baikoana.
@RajaSahabPTI: Raha hanarotsaronana ny natao fotsiny i Malala, nomena medaly, nokarakaraina be any amin'ny hôpitaly satria notafihan'ny TTP izy. Dia ahoana kosa ny momba ireo notifirin'ny fiaramanidina baikoana?????
@Kidwhy009 (Hafsah Q): RT @Realist0: ankizy aman_jatony maro mitovy amin'i Malala no notifirin'ny fiaramanidina baikoana isan'andro, ahoana ny momba azy ireo?
@akbar62 (Ghulam Akbar): natao tena tonga lafatra ny zava-niseho tamin'i Malala. Hadino kosa ireo matin'ny fiaramanidina baikoana. Miverina amin'ny niandohana ihany ity. Mampiaiky ny CIA.
@SohaibMalek (Sohaib Malek): @Shahidmasooddr ary tsy misy hetsika atao ihany momba ny fiaramanidina baikoana? Kanefa mitabataba be ery amin'ny zava-nitranga tamin'i Malala ! Zanak'ity tany ity ve izy ireo?
@YusraSAskari (Yusra Askari): Lojika misarona: ‘mamono ny fiaramanidina baikoana mba ho velona i Malala’ http://pic.twitter.com/S2SmfAK2 via@kirannazish #ShitYouCantMakeUp
Iray andro talohan'ny nitifirana an'i Malala dia nitarika diabe ho an'ny fandriampahalemana tany Waziristan Atsimo ny mpitarika ny Pakisatn Tehreek-e-Insaaf, Imran Khan, nanoherana ny tifitra ataon'ny fiaramanidina baikoana. Nijanona kely teo amin'ny fidirana tao Waziristan Atsimo ny andiana fiara niaraka taminy dia niantso an'i Pakistan izy hampitsahatra ny fandraisany anjara amin'ny ady amin'ny asa fampihorohoroana hiarahany amin'i Etazonia ary hampitsahatra ny fanafihana ataon'ny fiaramanidina baikoana. Nilaza koa izy fa naman'ny Taliban, ary nanameloka ny fanafihana natao tamin'i Malala kanefa tsy nanameloka ny Taliban izay nitonona ho tompon'antoka tamin'iny fitifirana iny.
Nilaza koa i Khan fa efa im-betsaka izy no nitady fihaonana tamin'ny Taliban hampisy fandriampahalemana ao amin'ny firenena.
Maro ny manohana an'i Malala saika manerana ny tany ary midera ny fahasahiany sady nanohitra ny Taliban. Misy fiareta-tory mandra-maraina miaraka amin'ny labozia atao ao Karachi tarihan'i Hetsika Muttahida Quami hivavahana ho an'ny fahasalamany. Olona marobe koa manerana an'i Pakistan no manao hetsika tahaka izany hahatsiarovana ny nataony sy ny fahasahiany. Misy koa ny hetsika fanoherana ny Taliban atao ivelan'ny klioban-gazety ao Karachi ary arahan'ireo mpitolona maro ho an'ny fandriampahalemana sy ny fiarahamonim-pirenena.
Fanangonan-tsonia amin'ny anarany no mameno ny internety. Anankiray amin'ireny ny ‘Fiarovana ny ankizy sy ny sekoly any avaratr'i Pakistan’. Marobe amin'ireo olona mpampiasa ny twitter no manohana an'i Malala ary manameloka ny Taliban amin'ny “fanafihana mohaka” nataon'izy ireo.
@asadmunir38 (Asad Munir) #MALALA:Mivavaha ho azy, mbola kely izy, te ho velona, manana nofinofy amin'ny ho avy, te handray andraikitra, reharehan'i Swat sy Pakistan, aza avela ho faty izy.
@MaryamNSharif (Maryam Nawaz Sharif): tsy azo sokajiana ho fanafihana natao tamin'olon-tokana ny fanafihana natao tamin'i Malala. Tena fankendana ny feon'ny liam-pandrosoana ireny.
@Shahidmasooddr (Dr Shahid Masood) enga anie ka homen'i Allah fahasalamana i Malala sy ny namany rehetra, omeny fahasambarana ary ho ela velona sy ho feno fahombiazana. Amena.
@sharmeenochinoy (Sharmeen Obaid) melohiko ny fanafihana an'i Malala tany Swat – tsy azonao ampanginina izahay ry mohaka! #Pakistan